Sawiro Khasaaraha Ka Dhashay Camaliyadda Istish-haadiyada Oo Sii Korortay. – Bogga Calamada.com
Sawiro Khasaaraha Ka Dhashay Camaliyadda Istish-haadiyada Oo Sii Korortay.
Ugu yaraan 17 askari oo ka tirsan murtadiinta ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay camaliyadii Istish-haadiga ee caawa fiidkii ka dhacday magaalada Muqdisho taas oo lagu beegsaday Kolonyo ka tirsan murtadiinta sida ay noo sheegeen Saraakiil ka tirsan mujaahidiinta.
Ugu yaraan 30 kalena oo ka mid ahaa ciidanka la beegsaday ayaa ku dhaawacay goobta, waxaana badankood loo qaaday isbitaalada gaarka ah ee cadowga.
Weerarkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo uu hogaaminayey geesi ka mid ah guutada Istish-haadiyiinta.
Ilo wareedyo ayaa noo sheegay in kolonyada la beegsaday ay wateen ku dhawaad 10 gaari oo nooca dagaalka ah, islamarkaana la beegsaday xilli ay marayeen meel u dhow isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan mujaahidiinta oo aan la xiriirnay ayaa noo sheegay in howlgalka uu u dhacay sidii loo qorsheeyey, islamarkaana halkaas ay ku burbureen gawaari fara badan.
Ma ahan markii ugu horeysay oo weerar midkan la mid ah ay mujaahidiintu ku beegsadaan kolonyooyin ka tirsan murtadiinta.
Camaliyad Istish-haadi ah oo bishii sept. ee sanadkan ka dhacday magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay Sarkaal sare oo lagu magacaabi jiray Goobaale iyo maleeshiyaad dhowr ah oo la socday xilli uu marayey mid ka mid ah wadooyinka Muqdisho.